Mamaly ny manjo ny COVID Ireo eo am-pototry ny tohatra toekarena - Fanentanana manerantany ho an'ny fandriam-pahalemana
Ny fiangonan'ny renin'i Carmel Sr. Merin Chirackal Ayrookaran dia manome saron-tava ho an'ireo mpiasa mpifindra monina ao amin'ny fanjakana atsimo andrefan'ny Kerala. (Sary: natolotra ny GSR)
Noho izany Fifandraisana Corona, manolotra famakiana mahasoa iray hafa avy aminay izahay Tatitry ny rahavavy eran-tany (tetikasan'ny Reporter Katolika nasionaly). Manolotra tatitra tsy manam-paharoa sy mivantana momba ny olana maro samihafa sy ny olana nateraky ny fanabeazana momba ny fandriam-pahalemana ny GSR, miaraka amin'ny filazalazana manentana ny fahamendrehana sy ny fanoloran-tenan'ireo masera maro katolika amin'ny asan'izy ireo handresena ireo tsy fahamarinana ifotony izay miteraka olana. GSR dia zava-tsarobidin'ny tranga fandalinana tranga ho an'ny fanabeazana ny fandriam-pahalemana.
Etsy ambany no hahitanao ny fandefasana ny lahatsoratra GSR tamin'ny 13 Jolay 2020 "Ireo masera karana dia manampy ny mpiasa mpifindra monina tafahitsoka mody mandritra ny fanidiana”Nialohavan'ny fanolorana fanampiana ireo mpanabe fandriampahalemana amin'ny fananganana fanadihadiana mahaliana.
"Ny masera Indiana dia manampy ny mpiasa mpifindra monina… ” dia iray amin'ireo tatitra mazava tsara navoakan'i Tatitry ny rahavavy eran-tany. GSR dia loharanom-pahalalana mazava tsara momba ny zava-misy amin'ny fijalian'olombelona apetraky ny rafitra ara-toekarena manerantany izay asehon'ny COVID-19, satria vao mainka mampitombo azy ireo izany (jereo koa: Ny tohatra ara-toekarena dia loko matevina.)
Ity tantara ity dia mitantara ny fomba famoronana sasany ataon'ny vehivavy ao amin'ny fiarahamonim-pirenena, amin'ity tranga ity, ny rahavavin'ny katolika, hamaly ny fahantran'ny mahantra, amin'ity tranga ity ireo mpiasa mpifindra monina Indiana, izay mizaka ny vokatry ny areti-mandringana. Mbola ohatra iray hafa amin'ny hetsika mivantana ataon'ny vehivavy eny an-kianja amin'ny toe-javatra krizy, hampandrosoana ny filaminan'ny olombelona. Hetsika toy ny asongadin'ny andiany GCPE tamin'ny herinandro lasa, Vaovao farany momba ny fandriam-pahalemana sy filaminana ho an'ny vehivavy.
Hitanay ny fomba anampian'ireo masera katolika ireo mpifindra monina tsy an'asa sy tsy manan-kialofana. Tsy manan-kialofana mametraka azy ireo ahiana hosamborina izy ireo noho ny fanitsakitsahana ny fanidiana mafy an'i India, tsy nanana fialofana izy ireo fa niverina, maro an-tongotra, ho any amin'ny vohitra niaviany. Ary hitantsika indray ny fahombiazan'ny hetsika eo noho eo sy eo an-toerana rehefa tsy mihetsika ny governemanta, ary ireo fikambanam-pirenena lehibe dia manahirana loatra amin'ny asa maika. Ny toe-javatra toy ireny dia nanome aingam-panahy ireo tolo-kevitra Drafiasan'ny vahoaka sy ireo hevitra napetraka tao amin'ny lahatsoratra GCPE: The Manifesto Alps-Adriatic: Politika Vaovao ho an'ny tontolo COVID a. Ny valiny tsy misy valiny sy tsy fahitan'ny fanjakana amin'ny fandrahonana planeta marobe, toy ny efa niainantsika tamin'ny areti-mandringana, fahantrana manerantany, fitaovam-piadiana niokleary, ary ny krizy ekolojika, dia mahatonga ny hetsika eo an-toerana maika kokoa ary manasongadina ny andraikitra sy ny mety ho an'ny fiarahamonim-pirenena hitarika ny lalana. mankany a Vaovao mahazatra.
Ireo masera karana dia manampy ny mpiasa mpifindra monina tafahitsoka mody mandritra ny fanidiana
Loreto Srs., Avy eo ankavia, Nirmala Toppo, Sawanti Lakra, Jiwanti Tete, Rajini Lugun ary Gloria Lakra dia miandry amin'ny hafanana migaingaina miaraka amin'ny fonosana sakafo ho an'ireo mpiasa mpifindra monina mifindra eny amin'ny fiantsonan'ny làlam-pirenena. (Sary: natolotra ny GSR)
(Navoaka avy amin'ny: Tatitry ny rahavavy eran-tany. 13 Jolay 2020.)
NEW DELHI - Tsy afaka natory i Sr. Sujata Jena taorian'ny nahitany sarina tovovavy iray nitondra enta-mavesatra teo amin'ny lohany tao anaty hafatra WhatsApp. "Ny endriny voaloto, mando tomany, nanenjika ahy," ny mpikambana ao amin'ny Fo Masin'i Jesosy sy Maria tamin'ny Global Sisters Report.
Naparitaka ny sary mba hanehoana ny fahorian'ny olona an-jatony izay tonga teny amin'ny làlambe India taorian'ny fanidiana nasionaly nisy ny areti-mifindra coronavirus.
Raha nahita ny sary sy horonan-tsary avy amin'ny lafivalon'i India tao amin'ny sehatra media sosialy i Jena, dia nanolo-tena hanampy ny mpifindra monina hody ny mpisolovava 38 taona. Ny clip video iray dia mampiseho mpiasa 10 nifatratra tamin'ny efitrano iray tao Kerala, fanjakana Indiana atsimo andrefana. Nilaza ireo lehilahy fa nanidy azy ireo ny mpampiasa azy ireo ary tena mila fanampiana izy ireo hanatratra ny tanànany any Odisha, maherin'ny 1,000 kilometatra avaratra atsinanana.
Rehefa nikatona tao amin'ny trano fitokanany tao amin'ny renivohitra Odisha ao Bhubaneswar i Jena tamin'ny 17 Mey, dia niditra tao amin'ny tambajotram-pifandraisana iray izay nanampy ireo mpifindra monina tafahitsoka.
Tamin'ny 24 Jona, mpifindra monina maherin'ny 300, anisan'izany ireo 10, tafahitsoka tany amin'ny fanjakana atsimon'i India no tonga tany amin'ny vohitra niaviany tany amin'ny fanjakana toa an'i Bihar, Chhattisgarh, Odisha ary Bengal Andrefana any atsinanan'i India, noho ny Ezaka nataon'i Jena.
Jena dia isan'ireo masera an-jatony katolika izay eo am-piandohana satria ny fiangonana dia tonga amin'ireo mpiasa mpifindra monina tratry ny fanidiana 21 andro voalohany ny praiminisitra Narendra Modi napetraka tamin'ny vahoaka 1.3 miliara tao India tamin'ny misasakalin'ny 25 martsa ary fampandrenesana adiny efatra fotsiny .
Ny fanidiana, no dinihina ny andrana lehibe indrindra sy henjana indrindra eto an-tany mba hahitana ny areti-mifindra, dia nitarina in-dimy miaraka amin'ny ambaratonga fialan-tsasatra isan-karazany hatramin'ny 31 Jolay.
Niteraka mpiasa mpifindra monina an-tapitrisany tsy an'asa tao amin'ny tanàna tampoka ilay fanidiana.
"Noho izy ireo very asa, dia tsy nanana toerana honenana, tsy misy fidiram-bola ary tsy misy filaminana," hoy Salesian Fr. Joe Mannath, sekretera nasionalin'ny Konferansa an'i India ara-pinoana, ny fikambanan'ny lehilahy sy vehivavy ambony ara-pinoana ao amin'ny firenena.
Rehefa nampiato ny rafitry ny fitateram-bahoaka any India ny fanidiana azy, dia nifatratra tamin'ny làlambe sy ny lalana ireo mpiasa mpifindra monina tao an-tanàna tao anatin'ny andro vitsivitsy. Nandeha an-tongotra ny ankamaroany ary ny sasany nandeha bisikileta nankany amin'ny tanàna nahaterahany, kilometatra an-jatony maro.
Nilaza i Mannath fa ny tahotra ny mosary sy ny voan'ny coronavirus dia nanjary “korontana fifindra”An'ny mpiasa avy amin'ny tanàna.
Ny vondrona fiangonana dia isan'ireo miezaka manampy ireo mpiasa ireo.
Tamin'ny 6 Jona, Caritas India, maso ivoho fanampiana ny eveka Indiana, dia nampahafantatra a webinar fa ny fiangonana dia nahatratra olona 11 tapitrisa mahery nandritra ny fotoanan'ny fanidiana, anisan'izany ireo mpiasa mpifindra monina maro.
Mannath, izay mandrindra ireo mpino 130,000 100,000 mahery any India, ao anatin'izany ny vehivavy XNUMX XNUMX eo ho eo, dia nilaza fa ny ankamaroan'io serivisy io dia nataon'ny mpivavaka.
Ny vehivavy sy ny lehilahy mpivavaka dia nihaona tamin'ireo mpiasa tratra an-dalambe, tao amin'ny trano fialofana ary vondron'olona ambanivohitra amin'ny faritra maro ao amin'ny firenena. Niaraka tamin'ny diosezy, ny fiangonana ary ny maso ivoho fanampiana dia nanome trano sy sakafo ary vola ho an'ireo mpiasa izy ireo hankanesana any an-tranony.
Nilaza i Mannath fa ny fivavahana katolika dia nahavita “asa mahafinaritra ho an'ny tena sahirana rehetra amin'ny alàlan'ny fanidiana.” Ny pretra Salesian koa dia nilaza fa ny zavatra nataon'ny mpivavaka dia "mihoatra lavitra" noho izay hita ao amin'ny tatitra rehetra.
“Rehefa nangataka tatitra lehibe momba ny zavatra natao aho, dia nahazo tatitra maherin'ny 750 izahay. Mampiseho ny asa fanompoana lehibe ataon'ny mpivavaka, "hoy izy tamin'ny GSR tamin'ny faran'ny volana Jona.
Manazava i Mannath fa ny mpivavaka katolika any India dia nanapa-kevitra ny tsy hanana drafitra mandrindra afovoany hanampiana ireo mpiasa, fa hanome vola ny isam-batan'olona sy ny fiangonana manompo azy ireo.
Anisan'izany ny fivavahana Loreto Punitha Visuvasam, Sr., any Doranda akaikin'i Ranchi, renivohitry ny fanjakana atsinanan'ny Jharkhand any India ary fonenan'ireo mpifindra monina an'arivony.
Rehefa nanomboka tonga tamin'ny kamiao sy bus ireo mpiasa, ireo masera Loreto tamin'ny 23 Mey dia nankeo amin'ny làlambe tany Jharkhand niaraka tamin'ny fonosana sakafo. Nahita olona maro nandeha an-tongotra lavitra ny masera. "Nanampy azy ireo hiakatra bus ho any amin'ny vohitra misy azy izahay," hoy i Visuvasam tamin'ny GSR tamin'ny alàlan'ny finday. *
Nilaza izy fa nahita ny mpiasa noana, nangetaheta ary reraky ny tanana ary nifamotoana toy ny biby tao anaty kamio. Nandritra ny herinandro maro, ny rahavaviny dia nanome sakafo olona 400 ka hatramin'ny 500 ho an'ny mpandeha isan'andro.
Izy ireo koa dia niara-niasa tamin'ny fiangonana hafa, toa ny Misiônera amin'ny fiantrana, sy ny tanora katolika mizara sakafo eo ambany fitarihan'ny Arsidiosezin'i Ranchi.
Fiangonana iray hafa ao Ranchi, ny Ursuline Sisters of Tildonk, nanantona ireo mpifindra monina nanomboka ny 3 aprily. Ireo masera dia nialokaloka ny sasany tamin'izy ireo tao amin'ny sekolin'izy ireo tao Muri, 40 kilaometatra atsinanan'ny Ranchi.
"Nomenay azy ireo avokoa ny filàna fototra toy ny sakafo, fitafiana ary fitaovam-piarovana," hoy i Sr. Suchita Shalini Xalxo, faritanin'i Ranchi an'ny fiangonana, tamin'ny 17 Jiona.
Nilaza i Xalxo fa tao anatin'ny "toe-pahasalamana" ireo mpifindra monina rehefa tonga teo afovoany. “Betsaka no nandeha an-tongotra roa na telo andro tsy nisakafo. Ny sasany nokapohan'ny polisy rehefa niampita fanjakana iray, ”hoy i Xalxo.
Ny fandaminana ny fitaterana ireo mpifindra monina no tena nampitebiteby ny olona toa an'i Sr. Tessy Paul Kalapparambath. ny Rahavavy misiônera ao amin'ny Immaculate** tany Hyderabad, renivohitry ny fanjakan'i Telangana atsimo atsinanan'i India, dia nanome sakafo sy fanafody ho an'ireo mpifindra monina an-dalam-pandrosoana.
Ny tranon'izy ireo vaovao, izay akaikin'ny lalambe iray, dia nizara sakafo masaka sy rano fisotro ho an'ny mpifindra monina 2,000. Ny ekipany koa dia nizara fonosan-tsakafo tao amin'ny gara.
“Tena nahavaky fo ny nahita olona noana sy mangetaheta an'arivony nandritra ity fahavaratra ity,” hoy i Kalapparambath, sekretera ny Vaomiera misahana ny asa ao amin'ny filankevitry ny eveka katolika Telugu, tamin'ny GSR.
Tany Hyderabad, Sr. Lissy Joseph an'ny Sisters of Maria Bombina nandeha tany amin'ny gara sy bus tamin'ny fiandohan'ny volana aprily raha nitantara ny fahorian'ireo mpifindra monina ny media. Nihaona tamin'ny mpiasa avy any Assam, Jharkhand, Odisha, Uttar Pradesh ary West Bengal izy - nivondrona anaty vondrona tsy nisy sakafo, vola na fialofana.
"Sehatra nanelingelina io," hoy i Joseph tamin'ny GSR.
Nisy vondrona nilaza tamin'i Joseph fa nanjavona ny mpampiasa azy ireo rehefa nitondra azy ireo tamin'ny kamio ho any Karimnagar any Telangana mpifanila vodirindrina aminy. Vitan'izy ireo ny nahita kamio iray hafa handeha ho any Hyderabad, 100 kilaometatra atsimo. Nihaona tamin'izy ireo i Joseph taorian'ny nangatahan'ny polisy azy ireo hiverina any amin'izay niavian'izy ireo. "Ny zavatra voalohany nataonay dia ny fikarakarana sakafo ho azy ireo," hoy i Joseph.
Nankany amin'ny polisy ilay masera avy eo, ary nandà ny hanampy ireo mpiasa ireo, ary nilaza fa tsy an'ny faritra misy azy ireo.
Toa an'i Jena dia nampiasa ny tamba-jotra ireo mpikatroka mafàna fo sosialy i Joseph mba hitady fanampiana amin'ireo mpifindra monina. Nanaparitaka ny sarin'ireo mpiasa tao amin'ny media sosialy i Joseph ary nisy mpisolovava vehivavy iray nametraka fitoriana tamin'ny polisy ary nampita ilay sary tamin'ny mpamory ny distrika.
“Manampy betsaka ny fizarana ny fahasahiranan'ireto mpifindra monina mahantra ireto. Nifindra ny raharaha ary nifandray tamiko ny biraon'ny mpiasa ao amin'ny fanjakana, ”hoy i Joseph nanazava. Ny manamboninahitra zandriny iray dia nitondra ny mpiasa tany amin'ny toeram-pialofana vonjimaika ary nandamina bisy roa hitondra azy ireo any Odisha.
Vonona ny hiatrika ny olan'ny mpiasa mpifindra monina ny masera sasany any Kerala. Ny fiangonan'ny renin'i Carmel dia nanomboka tamin'ny 2008 ny CMC Hetsika ho an'ny mpiasa mpifindra monina hanampiana ireo izay mandositra ny herisetra manohitra ny Kristiana ao Odisha tamin'io taona io. Nitarina io taorian'izay mba hanampiana ny mpiasa avy amin'ny fanjakana hafa.
Ny talen'ny Merin Chirackal Ayrookaran, izay mandrindra ny hetsika, dia nilaza fa nanamboatra tobim-pitsaboana, telecounseling ary pas ho an'ireo mpiasa tratra an-trano hody izy ireo.
Any Delhi, Fo masina Sr. Celine George Kanattu dia anisan'ireo manampy ireo mpifindra monina tafahitsoka. Nanomboka nanampy ny mpiasa izy taorian'ny nanatonan'ireo mpiasa an-trano azy sakafo. Miaraka amin'ny fanohanan'ny malala-tanana sy ny fiangonany, ny ekipany dia nanome sakafo, fitafiana, sarontava sy mpanadio ho an'ny mpifindra monina 600.
Iray amin'ireo mpandray tombony amin'i Kanattu i Jameel Ahmed, Silamo izay mitondra taxi-be. Nilaza ny raim-pianakaviana manan-janaka efatra fa maty mosary ny fianakaviany raha tsy nomen'ireo masera katolika kitapo sakafo izy ireo.
Ny fahatsapana toy izany dia nolazaina tamin'izy ireo Anabavy Anne Jesus Mary, talen'ny ivon-toeram-pandrosoana any Jashpur, tanànan'ny fanjakana Chhattisgarh any afovoan'i India.
Nilaza izy indraindray fa hisambotra fonosana avy any an-tanany ireo mpifindra monina ary hihinana azy ireo avy hatrany. “Hilaza izy ireo avy eo hoe, 'Ramatoa, afaka mandroso isika izao. Manantena izahay fa hahita olona toa anao amin'ny diany mialoha, '”hoy ny misiônera Franciscan avy any Mary nun tamin'ny GSR.
Mpiasa maro no nitana ny fifandraisany tamin'ireo masera rehefa tonga tany an-trano.
Jena dia namorona vondrona WhatsApp niaraka tamin'ireo izay nampiany. “Ampiasain'izy ireo ho mpanampy ireo. Mahazo antso maro aho. Indraindray dia afaka matory aho aorian'ny 2:30 maraina, mba hahazoako antoka fa hiverina soa aman-tsara izay te hody. ”
Nalefany koa ny sarin'ilay zazavavy nitomany ho sariny fampisehoana WhatsApp. "Hotehiriziko io mandra-pahatongan'ny mpiasa mpifindra monina farany any an-trano," hoy izy nanamafy.
[Jessy Joseph dia mpanoratra mahaleo tena any New Delhi. Ity tantara ity dia ampahany amin'ny fiaraha-miasa eo amin'ny GSR sy Raharaha India, vavahadim-baovao miorina any New Delhi izay mifantoka amin'ny vaovao ara-tsosialy sy ara-pinoana.]
Ny mpitarika ny tanora dia mitaky hetsika: Famakafakana ny fanapahan-kevitry ny filankevitra fiarovana an'ny Firenena Mikambana momba ny tanora, ny fandriampahalemana ary ny filaminana
Inona no azon'ny Fampianarana fandriam-pahalemana ampianarina antsika momba ny fanavaozana ny polisy?
Ahoana ny fampidirana ankizy mandritra ny karatra an-trano
Clarissa Mariano-Ligon, Ph.D. mizara ny fanazaran-tena isan'andro arahin'ny zanany roa lahy mba hitazomana ny fandanjana eo amin'ny hetsika ataon'ny tsirairay sy ny fianakaviana. [tohizo ny famakiana…]
"Fahafantarana ny fanahiana amin'ny zaza sy ny zavatra azonao atao manoloana an'io"
Enga anie 3, 2020 Vaovao sy hevi-dehibe 0
Ny mpitsabo aretin-tsaina zaza an-jaza sy Zaza, Zairah Castelo-Corpus, MD dia mamporisika ny ray aman-dreny hanome ny ankizy kely tontolo iainana sy hikolokolo azy ireo hanampy azy ireo hiatrika am-pahombiazana mandritra ny areti-mandringana. [tohizo ny famakiana…]
Fahamarinana, Posttruth ary COVID-19: valinteny fanabeazana sasany
Aprily 16, 2020 Vaovao sy hevi-dehibe 0
Miaina amin'ny vanim-potoanan'ny lahatsoratra ve isika? Inona avy ireo singa mandrafitra an'io? Inona no vokatr'izany teo amin'ny fandavana voalohany, ny tsy fihetsehana ary ny valin-kafatra (ary mahafaty) ny valin'ny areti-mandringana - indrindra fa ny demokrasia tandrefana? Ary ahoana no mety fandraisan'ny mpampianatra? [tohizo ny famakiana…]